Transportation Nduzi - Shanghai Donnor ngosi Service Co., Ltd.
jara mma Ihe
Exhibitors - Club ọnọde & njikọ
Exhibitors - Igwu Pool Equipment, Facility & ngwa oru
Exhibitors - Indoor Ọtọ Equipment
Exhibitors - Fashion n'uwe, Shoes & ACC
3 Day Free Ulo
na-atụ aro Hotels
Travel na Shanghai
Iji gaa na igosipụta
Shanghai New International Expo Center (SNIEC) emi odude ke Pudong New District, Shanghai na nnọọ mfe iji ọtụtụ n'aka nke iga. Ọha na eze na okporo ụzọ ibe aha ya bụ 'Longyang Road Station' maka ụgbọ ala, Metro edoghi na maglev, guzo gburugburu 600 mita iche si SNIEC. Ọ na-ewe banyere 10 nkeji na-eje ije site na 'Longyang Road Station' na fairground. Ke adianade do, Metro Line 7 bụ kpọmkwem ka SNIEC na Huamu Road Station onye ụzọ ọpụpụ 2 bụ nso Hall W5 nke SNIEC.
SNIEC na-conveniently emi odude ọkara ụzọ n'etiti Pudong International Airport na Hongqiao Airport, 33 km n'ebe Pudong International Airport n'ebe ọwụwa anyanwụ, na 32 km n'ebe Hongqiao Airport n'ebe ọdịda anyanwụ.
Site taxi: banyere 35 nkeji, gburugburu RMB 95
Site maglev: naanị 8 nkeji, RMB 50 maka otu tiketi na RMB 90 maka tiketi njem okirikiri
Site ọdụ ụgbọ ala akara: edoghi Nke 3 na nke 6; banyere 40 nkeji, RMB 16
Site Metro: Line 2 to Longyang Road Station. Site n'ebe ahụ i nwere ike ma na-eje ije na SNIEC ozugbo ma ọ bụ ibe Line 7 Huamu Road Station; banyere 40 nkeji, RMB 6
Site taxi: banyere 30 nkeji, gburugburu RMB 45
Site Metro: Line 1 Ndị mmadụ Square, mgbe ibe Line 2 to Longyang Road Station. Site n'ebe ahụ i nwere ike ma na-eje ije na SNIEC ozugbo ma ọ bụ ibe Line 7 Huamu Road Station; banyere 35 nkeji, RMB 4
Site taxi: banyere minit 25, gburugburu RMB 55.
Site Metro: Line 1 Ndị mmadụ Square, mgbe ibe Line 2 to Longyang Road Station. Site n'ebe ahụ i nwere ike ma na-eje ije na SNIEC ozugbo ma ọ bụ ibe Line 7 Huamu Road Station; banyere 45 nkeji, gburugburu RMB 5
Site Metro: Line 2 to Longyang Road Station. Site n'ebe ahụ i nwere ike ma na-eje ije na SNIEC ozugbo ma ọ bụ ibe Line 7 Huamu Road Station; banyere 50 nkeji; gburugburu RMB 6.
SNIEC locates na nrutu nke Longyang na Luoshan ụzọ na-eduga si n'obodo center n'elu Nanpu Bridge na Yangpu Bridge site Pudong, na dị mfe ohere ụgbọala.
Park nza: E nwere 4603 adọba ụgbọala raara ka ọbịa na ihe ngosi center.
Car park ebubo: RMB 5 = otu hour, kacha kwa ụgwọ = RMB 40. Rates emetụta ụgbọala na ndị ọzọ nile na ìhè ugbo ala.
A ọnụ ọgụgụ nke ọha ụgbọ ala edoghi na-agba ọsọ site SNIEC, gwara ụgbọ nso SNIEC: 989, 975, 976, Daqiao No.5, Daqiao No.6, Huamu No.1, Fangchuan Line, Dongchuan Line, Airport Line No.3, Airport Line No.6.
Tagzi ntinye akwụkwọ itieutom:
Ndị na-esonụ ụgbọ na-agbarịta ibe ojii na Line 7 (pụọ na Huamu Road Station):
Line 2 - Jing'an Temple ma ọ bụ Longyang Road
Line 4 - Zhenping Road ma ọ bụ Dong'an Road
Ndị na-esonụ ụgbọ na-agbarịta ibe ojii na Line 2 (pụọ na Longyang Road Station):
Line 1 - Ndị mmadụ Square
Line 4 - Zhongshan Park ma ọ bụ Century Avenue
Line 8 - Ndị mmadụ Square
Line 10 - Hongqiao Railway Station, Hongqiao Airport Ngwọta 2 ma ọ bụ East Nanjing Road
Ndị na-esonụ ụgbọ na-agbarịta ibe ojii na Line 16 (ga-apụ na Longyang Road Station):
Okwu: 16F, Nke 441 North Henan Road, Jinyi mansion, Shanghai, China
© Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. - Apụta Products - Sitemap - Mobile Site
Core Fitness Equipment, 2020 Iwf Shanghai Fitness Expo, Health Na Fitness Trade Gosi , Ụmụaka Fitness Course , Hoist Workout Equipment, True Fitness Equipment,